Tatarstan नदी को एक ठूलो संख्या विशेषताहरु। तपाईंले खाता सबै ले भने, पनि सानो, तिनीहरूको संख्या लगभग तीन हजार गर्न मात्रा। खाना प्रकार मुख्य रूप मिश्रित। वसन्त मा नदी को Tatarstan गणतन्त्र अक्सर, जाने आफ्नो ओछ्यानमा बाहिर वरपरको क्षेत्र बाढी। तर गर्मी र शरद ऋतु मा पानी स्तर मा एक महत्वपूर्ण गिरावट छ। तर, एक विशेष वर्षाको वर्षमा अल्पकालीन बाढी छन्। हिउँदमा, बरफ ढाकिएको नदी, नियम, यो नोभेम्बर को सुरुमा हुन्छ।
Tatarstan मुख्य ठूलो नदी - को वोल्गा र Kama। र आफ्नो tributaries सम्पूर्ण क्षेत्रको लागि एक उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शन।
सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा पूर्ण-बगिरहेको नदी वोल्गा Tatarstan विचार। देश मा आफ्नो लम्बाइ 177 मी छ। वोल्गा - सागर मा पर्दैन कि केही ठूलो संसारमा नदीहरूको एक। यो कुनै कम 300 भन्दा tributaries, ओका र Kama गर्न मानिन्छ सबै भन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जो छ। नदी को स्रोत को मा स्थित छ Valdai हिल्स, र मुखले कैस्पियन सागर छ। Watercourse 1 मीटर को सानो वसन्त लम्बाइ र 30 सेमी, दलदली पोखरी बीच स्थित छ जो एक गहिराई बाट यसको मूल लाग्छ। डेल्टा बारेमा 500 हतियार र यसको चौडाइ 30 भन्दा बढी मी अवशोषित। को वोल्गा नदीको मा कजान थप 85 मी बग्छ। च्यानल तल्लो भाग बनाउँछ जो Kama, धेरै व्यापक छ। यी नदी Tatarstan आफूलाई क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तिनीहरूले मात्र होइन उद्योग तर पनि पर्यटन क्षेत्र प्रयोग गरिन्छ - डुङ्गा यात्रा सङ्गठित छन्, तटीय क्षेत्रमा त्यहाँ धेरै मनोरञ्जन छन्। को वोल्गा मा त्यहाँ 8 मुख्य waterworks, को वोल्गा क्षेत्र र उद्योग लागि ऊर्जा प्रदान जो छन्।
Kama छ भन्दा पूर्ण-बगिरहेको नदी Tatarstan गणतन्त्र को। यसलाई यो वोल्गा मा बग्छ भनेर विश्वास छ, तर यो विवाद धेरै छ। केही विद्वान को मुख्यधारा Kama पहिले गठन तर्क। नदी को स्रोत माथिल्लो Kama Upland मा स्थित छ। उहाँले4साना प्रवाहको साथ सुरु हुन्छ। प्रवाह Kama नदी को विशाल संख्या, मुख्य व्यक्तिहरूलाई Visscher, Vjatka र TROWEL छन्। स्थित आफ्नो पूर्ण-बगिरहेको उपत्यकाका Nizhnekamsk Reservoir। यसलाई त्यहाँ वोल्गा क्षेत्रको ऊर्जा आपूर्ति को एक महत्वपूर्ण भाग हो भनेर उहाँलाई धन्यवाद थियो।
Tatarstan Kuibyshev नदी इलाका मा जलाशय मा बग्छ। यो बिन्दुमा हामी Tanayevsky grasslands, संरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्ज को भाग हो जो गठन। साथै, Kama, Tatarstan थुप्रै अरूलाई जस्तै, एक navigable नदी छ। यो रूस मा एक प्रमुख परिवहन हब रूपमा मान्यता छ। प्रकृति र तटीय क्षेत्रको परिदृश्य पर्यटक एक अपेक्षाकृत राम्रो रकम आकर्षित। अक्सर तपाईं क्याच को लागि यहाँ आएका गर्ने माझिहरु पूरा गर्न सक्छन्।
Vyatka "सबैभन्दा ठूलो नदी Tatarstan" को स्तर मा एक अग्रणी स्थिति धारण। यो एक सही tributary छ। Kama। Udmurtia Yar क्षेत्र उत्तरी भाग मा माथिल्लो Kama Upland देखि बग्छ जो नदीको स्रोत छ। यसको ट्रयाक को तातार शहर Mamadysh नजिकै बित्दै। यो Vyatka Kama मा बग्छ भनेर यहाँ छ। एक रोचक तथ्य यी नदीहरू नै पहाडी सुरु, र त्यो त केही किलोमिटर एक दिशा मा ठाउँ लिन तिनीहरूले विभिन्न दिशामा रोल्ड सम्म पर्याप्त समानान्तर छ: Vyatka - पश्चिम गर्न, र Kama - पूर्व गर्न।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदी को tributaries को कोबरा र साना (दायाँ), र Kilmez Cheptsa (बायाँ) छन्। Vyatki समयमा तीव्र परिवर्तन गरेर सम्पूर्ण लम्बाइ साथ ट्रयाक घुमावदार, दिशा मा विशेषता। नदी राफ्टिंग यसको सम्पूर्ण लम्बाइ एक स्थायी ढुवानी यातायात स्थापित वस्तुतः माथि छ।
सेतो नदी - सबैभन्दा प्रिय र सुन्दर पानी Tatarstan स्ट्रिम। यो Kama नदी को सबै भन्दा ठूलो बायाँ tributary छ। अक्सर Tatarstan नदी को नाम आफ्नै भाषा स्थानीय मा सुने गर्न सकिन्छ। किन सेतो बस Agidel भनिन्छ छ।
Bashkortostan मा, Iremel को शहर नजिकै, यो यसको स्रोत हो। यो एक दलदली क्षेत्र मा स्थित र हिमालहरू Avalyak को खुट्टा मा छ। यो नदी को कुल लम्बाइ 400 1 भन्दा बढी मी छ। सेतो लागि छिटो बहने, तीव्र ढलान, तीव्र पालैपालो, को तट को heterogeneity द्वारा विशेषता। छोटो मा, पर्याप्त ठाडो को watercourse को स्वभाव। तर, जब यो पी बग्छ। ऊफा, तेजी पाठ्यक्रम जो समतल नदी लागि विशिष्ट छ, अधिक शान्त र मापन हुन्छ। मुख्य tributaries ऊफा, सिम, Nugush, बीर छलफल गर्न सकिन्छ। सेतो नदी माझिहरु र पर्यटकहरु बीच विशेष लोकप्रिय छ।
"ठूलो नदी Tatarstan" सूची पनि watercourse Sviyaga थप्छ। यसलाई प्रसिद्ध वोल्गा एक सही tributary छ र गणतन्त्र को इलाका मार्फत बग्छ। नदी को तातार नाम - Zia। यो गाउँ Kuzovatovo थप ठीक वोल्गा Uplands नजिकै सुरु, र। सबैभन्दा रोचक कुरा यो नदी धेरै स्रोतहरु छन् भन्ने छ। दोस्रो रातो केिकलयिरग मा स्थित छ, र तेस्रो - गाउँमा Baevka मा। Sviyaga को कुल लम्बाइ - 370 भन्दा बढी मी, तर सीधा Tatarstan को क्षेत्र मा - बारे मा 205 km। मुख को Kuibyshev जलाशय छ। यो नदी लागि sinuous ट्रयाक, इन्डेन्ट तट द्वारा विशेषता छ। शक्ति मिश्रित प्रकार। वसन्त मा नदी पूर्ण-बगिरहेको। क्षेत्रीय स्तरमा Tatarstan को गणतन्त्र, यो आधिकारिक प्राकृतिक स्मारक रूपमा मान्यता छ।
प्रकृति मा पानी चक्र
जेलिफिस लेक, पलाउ। जेलिफिस लेक कहाँ छ?
Zhabopodobnaya horned छेपारो
यूरेशिया मा सबैभन्दा लामो नदी। विवरण र विशेषताहरु
कैलकुलेटर Casco के हो?
लोक उपचारका साथ आंतों को उपचार। व्यञ्जनहरू, समय परीक्षण
को चेल्याबिन्स्क क्षेत्रमा स्की रिसोर्ट्स, "Abzakovo", "स्नान", "Zavyalikha"
सबै भन्दा राम्रो अनुहार क्रीम।
घटाइएको भूख - कारणहरू, उपचार
शुक्राणु bakposev: सङ्केत गर्छ, तयारी, वितरण, डिकोड